musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indasitiri yekufambisa inozosangana zvakare kuWTM London
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Musangano mukuru kwazvo wevashandi veindasitiri yekufambisa munyika kubva pakatanga denda ndiyo puratifomu yakakwana yekupora muna 2022. Chiratidziro chakaratidza misangano yebhizinesi yakawanda, makonferensi ane hungwaru uye misangano yevatori venhau.
WTM London yemuviri show yadzoka!
Kuvhurwa kweWTM London kwakaitika zviri pamutemo naHE Ahmed Al Khateeb, Minister of Tourism muSaudi Arabia; Fahd Hammidaddin, Chief Executive Officer weSaudi Tourism Authority; Hugh Jones akatumidza CEO kuRX Global uye Princess Haifa AI Saud, Mutevedzeri weGurukota reKushanya muSaudi Arabia.
Zuva rekutanga reshoo rakagamuchira varatidziri vanobva kunyika dzinopfuura 100 nematunhu, vanopfuura 6,000 vakanyoreswa kare vatengi kubva kunyika dze142 uye nyanzvi dzekufambisa kubva kumativi ese enyika.
Kushanyirwa kwemutoro ndiyo yaive dingindira rezuva iri. Sechiitiko chinotungamira chepasi rose cheindasitiri yekufambisa, WTM London yakarwira chikonzero chekushanya kwakanaka uye wepagore weWTM Responsible Tourism Awards akapemberera akanakisa ekufamba mumapoka - runyorwa rwevakundi ruchaburitswa mangwanani ano.
Vechidiki vari kuwedzera kutendeukira kune vafambisi vekufambisa kuenda kuzororo nekuda kwekuvhiringidzika uye matambudziko anoonekwa panguva yedenda, sekureva kweWTM Indasitiri Report.
Ongororo yaro yevatengi vanosvika chiuru yakawana makumi maviri nemaviri muzana yeavo vane makore makumi matatu nemashanu kusvika makumi mana nemana vakati vangango shandisa mumiriri, pamwe ne1,000% yeavo vane makore makumi maviri nemaviri kusvika makumi maviri nemana uye 22% yeavo vane makore gumi nemasere kusvika makumi maviri nerimwe.
Mutori wenhau anoremekedzwa wekufamba Simon Calder akapa izvi nezvimwe zvakawanda zvakanaka zvakawanikwa kubva kuWTM's Industry Report pazuva rekutanga rechiitiko.
Chirevo ichi chakawanawo kuti vanoita zvezororo vane mukana wakapetwa kana wekubhuroka pasuru pane kugovana-hupfumi hwekugara kwegore rinouya.
Vanosvika chikamu chimwe muzvitatu (32%) cheavo vanofunga nezvezororo remhiri kwemakungwa muna 2022 ndivo vangango bhuka zororo repasuru, zvichienzaniswa ne8% vanozobhuka kuburikidza nenzvimbo yehupfumi yekugovana, seAirbnb.
Calder akaudza vamiriri kuti: “Ndiri kuwana zvichemo zuva rega rega kubva kuvanhu vakaita rwendo ivo pachavo kana kushandisa rimwe remasangano asingatarisirwe zvakanyanya ekufambisa epamhepo.
"Kushandisa kambani yepasuru kuri nani uye kushandisa mumiriri wekufamba-famba zvinoreva kuti havakusiye wakapererwa. Kuvhiringidzika kwese kuri kuita kuti vanhu vashandise vafambisi vekufambisa. "
Vatengi pavakabvunzwa nezve kwavaizoda kuenda, hotspot yepamusoro yaive Spain, ichiteverwa nedzimwe tsika dzechinyakare dzeEurope dzakaita seFrance, Italy neGreece, neUS - iyo ichavhurazve kune vanoita zororo reBritish musi wa8 Mbudzi mushure mekurambidzwa kubvira. Kurume 2020.
Chirevo chakaratidzawo kuti vazhinji vemazana mazana manomwe enyanzvi dzekutengesa dzakabvunzwa nezvemushumo uyu vari kutarisira kuti kutengeswa kwa700 kuenderane kana kurova 2022.
Uyezve, vangangosvika makumi matanhatu muzana muzana yevatariri vekufambisa vanotenda kuti kusimudzira kwave kuri pamberi peiyo indasitiri.
VaCalder vakaitawo hurukuro yenhaurirano dzakasimudzwa netsvakiridzo.
John Strickland, nyanzvi yezvendege yeWTM, akati vatakuri vane mutengo wakaderera vakaita seRyanair neWizz Air vanga vachiona nhamba dzemigwagwa dziri nani asi ndege dzakaita seBritish Airways neMhandara Atlantic, dzinovimba nemigwagwa mirefu neinoyambuka, dzanga dzichitora nguva refu kupora.
Akataura nezve fungidziro kubva kuIATA iyo yakati traffic haisi kuzodzokera kune pre-denda kusvika 2024.
Zvakare, haafunge kuti rwendo rwebhizinesi ruchadzokera kumashure nenzira iyo misika yakazviita yekutandara uye kushanyira shamwari nehama.
Nekudaro, Tracey Halliwell, Director weTourism, Kokorodzano & Zvikuru Zviitiko kuLondon & Partners, akati kune "yakasimba" pombi yekushanya kwebhizinesi uye zviitiko zvikuru muguta guru.
"Ndine tarisiro nekusingaperi kuti London ichadzokera pachinzvimbo chayo chepamusoro," akadaro.
Kufamba nhandaro kuchapfuura chero kushomeka kwekushanya kwebhizinesi nekuti kuchave ne "bleisure" yakawanda, iyo ichaona vanhu vachiwedzera zvinhu zvezororo kunzendo dzavo dzebasa, akawedzera Halliwell.
Harold Goodwin, nyanzvi yezvekushanya kweWTM, akati chikamu chezvekushanya kwendege chichafanirwa kudzorwa, kunze kwekunge chacheka kabhoni, akayambira.
Semamwe matunhu decarbonise, kubhururuka kwepasi rose kuchava chikamu chikuru chezvinobuda, zvichikwira kusvika pamakumi maviri nemana muzana panosvika 24 kana maitiro azvino akaramba.